Ike Staynọgide: Ogologo oge ole ka ị ga-anọ? | Martech Zone
Onye ọ bụla ị họọrọ nwere uru na ọghọm ya - otu n'ime ha nke anaghị atụlekarị bụ ike ịnọ na mkpọsa.
Seth dere banyere Reebok izu ole na ole gara aga na otu ha si eme mkpọsa zuru oke nke ha, ọ dị nwute na agbahapụ ha. Derrick Daye na-ahọpụta usoro n'ime Top 5 kacha mma Superbowl Mgbasa ozi mgbe! Gaa na saịtị ahụ, ma gị na gị nweta njehie 404.
Taa, anyị banyere otu n'ime nkuzi anyị na-ere ma chọpụta na vidiyo ahụ adabaghị na nwelite nke na-eme na interface. Kama ị na-ebunye vidio ọhụrụ iji kwuo maka mgbanwe na ihe kpatara ha ji dị oke mma, ndị folks na-amụta site na nkuzi ahụ ka nọ na mgbagwoju anya. Lee ohere dị mwute maka ahịa furu efu! Ọ bụrụ n’inwee nnukwu atụmatụ, ikwesiri ịkpọ ha na vidiyo gị!
Laghachi azụ… otu n'ime ihe ịtụnanya nke vidiyo bụ ike ya na-adịgide adịgide dị ka usoro ịkọ akụkọ. Blog posts do emechaa gafee oge. Oge na-agbanwe, ndị na-ede blọgụ na-agbanwe obi ha, ma ọ bụ blọọgụ ọzọ na-arụ ọrụ ka mma ma na-elebara anya. Ahụwo m di na nwunye blog posts m ogbo m ebe m kwuru, “Hey… M dere na a ọnwa gara aga!” Maa amụma? Ọ dịghị mkpa!
Ihe ntinye ederede enweghi ike inwere ike iche. Chegodi mkpokoro ọdịnaya… ochie ọdịnaya na ala stinks. O meela ochie, ọ dịghịkwa onye ga-ahụ ya ọzọ. Ejiri ọdịnaya ọhụrụ dochie ya. Fọdụ ndị na-ede blọgụ dị ka m na-anwale ịtụgharị ọdịnaya ochie site na ịkọwa ya na post ma ọ bụ jiri ya yiri posts plugins. Ihe ndị metụtara ya bụ Viagra nke ịde blọgụ. Ọ na-agbatịkwu ndụ nke ọkwa ntakịrị, mana ọ gaghị eme ka ọ dịghachi ndụ wee weghachite ya n’elu ikpo ahụ.
Ọ bụrụ na anyị lelee ndị na-ajụ ase ọzọ anya, ha enweela ogo dị iche iche ịnọrọ ike. Telivishọn nwere ihe dịka 10 nke abụọ ịnọ ike (belụsọ ma ị laghachi n'ụbọchị Johnny Carson na netwọkụ 3). Redio nwere minit ole na ole. Akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị nwere ụbọchị. Akwụkwọ akụkọ Sunday nwere ike ịnwe otu izu. Ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịdị ọnwa ole na ole ruo otu afọ. Blog posts nwere ike ịdịru ụbọchị ole na ole ruo otu izu. Direct mail dịruru anya n'etiti igbe akwụkwọ ozi dị na ahịhịa nwere ike…
Ma Video! Lee ọ bụ afọ 4 mgbe e mesịrị, anyị ka na-achị ọchị Terry Tate, onye na -ahụ maka ụlọ ọrụ:
Ihe iburu n'uche mgbe ị na-eche maka Nlaghachi na ntinye ego nke azụmaahịa, ọ bụghị ya?
Tags: Larry tateire nloghachi na ntinye egoụlọ ọrụ linebackerseth godinViagra
Dec 12, 2007 na 8:03 PM
Doug, nke ahụ bụ ọkacha mmasị m SB azụmahịa nke oge niile. Agbanyeghi ikwenye na echefuru m na ọ bụ maka Reebok.
Dec 12, 2007 na 8:19 PM
Akwa post WOOOOO !, Ekwenyere m na vidiyo dị ogologo oge na-adịgide adịgide. Anaghị ere m vidiyo ahụ bụ ọhụụ ọhụrụ na Marketing ROI n'agbanyeghị. Echere m na ole na ole ụlọ ọrụ “ga-” video na ihe ọ na-ewe iji mee ka ha ikpeazụ last ọtụtụ na-emeso ya dị ka nanị ihe ọzọ na-ajụ ọkara na ha nwere ike ịgwa ndị ahịa ha. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka ụlọ ọrụ si jiri vidiyo na ndị na-eri ihe na-eri ha ugbu a na brọdband na netwọk mmekọrịta na-ekwe ka vidiyo gbasaa ngwa ngwa.
Dec 12, 2007 na 10:41 PM
Otutu ndi ahia ahia di iche iche gara aga na m, enwere m obi. Amaara m ma ọ bụrụ na m na-echeta ihe ọ bụla ọzọ banyere ndị okike karịa njirimara ahụ. / akpụ ụkwụ
Na ndị Patriots na-achị m nzọ na anyị na-ahụ nnukwu okwu “ịhụ mba n'anya” na-enweghị atụ n'afọ a na ndị mgbasa ozi nwere olileanya na NE na-eme ya nnukwu egwuregwu.
Dec 12, 2007 na 11:36 PM
Anụ m n'olu dara ụda na nke ọma. Ka o sina dị, a na m eche otu Shakespeare ma ọ bụ ụfọdụ n’ime ndị edemede ukwu ndị ọzọ siri nwee ike iguzogide mbibi nke ọtụtụ narị afọ. Enweghị vidiyo n'ebe ahụ. Ikekwe ọ bụ naanị na ọgbọ anyị na-ahọrọ ihe osise dị iche na okwu ederede.
Dec 13, 2007 na 3:49 PM
N'ihi na ha na-ese okwu nke ọma na okwu nke ọma. Mgbe okwu gbara ihe osise ọ bụla na-ahụ -n'ime uche nke ha- 'iche' foto (s) Ebe ọ bụ na igwe onyonyo / ihe nkiri anyị, a manyere anyị ịhụ nkọwa onye ọzọ karịa ịkepụta nke anyị.
Dec 13, 2007 na 1:18 PM
Chaị, ịtụnanya na azụmaahịa ahụ ka na-adịgide n'ike - ọ bụ naanị m achọ ịma ọchị!
@ Alex. M chefuru na ọ bụ maka Reebok n'agbanyeghị. Kedu ihe nke ahụ na-ekwu?
Rịba ama ihe nke oge ochie na azụmahịa? "Nke ahụ bụ oku tere aka, Doug!" Hmm, echekwala na nke ahụ abụghị nnukwu ihe ọzọ.
Ka o sina dị, ka na-atọ ọchị.